” မိုးကျရွှေကိုယ်များနဲ့ဆာသော်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ” မိုးကျရွှေကိုယ်များနဲ့ဆာသော်”	6
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jan 31, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary |6comments
ဘောစချုပ် မိတ်ဆွေရဲ့သားလေးကို ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပါတ်က အလုပ်သွင်းထားတာ
အလုပ်မလာတာ နှစ်ရက် ရှိသွားလို့ ဖုန်းနဲ့လှမ်းမေးလိုက်တဲ့အခါ
“မလုပ်တော့ဘူး”လို့ ဖြေသံကြားလိုက်တော့ ဆာသော်အတော်လေးစိတ်တိုသွားပါတယ်။
သူ အလုပ်လိုချင်တုံးက သူ့အဖေရော အမေရော ဘောစချုပ်ဆီ အကြိမ်ကြိမ်လာ
ဖုန်းတွေ အခါခါ ဆက်ပြီး အလုပ်တောင်းတာကို မှတ်မိနေတော့ ပိုစိတ်တိုပါတယ်။
အဲဒီတုံးက သူ့ပုံစံ ညှင်းသိုးသိုးနဲ့ နေတဲ့ထိုင်တဲ့အချိုးကိုမြင်ကတည်းက
“ ကောင်လေးပုံစံကို ဆာသော် သိပ်မကြိုက်တာ ‘မမ’ သိပါတယ်။
သူ့မိဘတွေနဲ့ ‘ မမ ‘တို့ အရင်တုံးက အတော်လေး ရင်းနှီးခဲ့တာရယ်
သူတို့ မသောင်သာတာ သိတာရယ်ကြောင့်ခေါ်ထားလိုက်တာပါ”
လို့ လေချိုသွေးပြန်တော့ ဆာသော်လည်းဘာမှ ဆက်မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။
သူလဲ မိုးကျရွှေကိုယ် တစ်ပါးပေါ့။
အလိုလို ကျ ကျ လာတတ်တဲ့ မိုးကျရွှေကိုယ်တွေကို
ဖတ်ရတဲ့အခါ အလုပ်ထဲ ကို ရောက် ရောက်လာတဲ့ မိုးကျရွှေကိုယ်တွေအကြောင်း
မိုးကျရွှေကိုယ် ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို ဘယ်သူ စပြီး ထွင်လိုက်သလဲဆိုတာကိုမသိပေမယ့်
ဟိုးအရင် ဆာသော်တို့ ငယ်ငယ်က အစိုးရ အလုပ်ရဘို့ဆိုတာ
အလုပ်နေရာအတွက် သတင်းစာကနေ ခေါ်ထားမှန်ပေမယ့်
မခေါ်ခင်ကတည်းက ခန့်ထားပြီးသား မိုးကျရွှေကိုယ်တွေက ရှိပြီးသားပါ။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရာထူး နေရာအသစ်ပေါ်ပြီ ဆိုတာနဲ့
ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ကျလာမှန်းမသိရတဲ့ မိုးကျရွှေကိုယ်တွေက ရောက်ပြီးသားဘဲ။
စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုစပြီဆိုတာနဲ့ အထက်က နေ ချပေးလိုက်တဲ့ မိုးကျ ရွှေကိုယ်တွေက
မိုးကျရွှေကိုယ်တွေကတော့ နေရာအနှံ့အပြားမှာ ကျကျ လာတာရှေးကတည်းကရှိနေခဲ့တာ
ဆာသော်တို့ငယ်ငယ်က အစိုးရ၀န်ထမ်းဖြစ်ဘို့ဆိုတာ အပြင်လူအတွက်
ဒီတော့ အလုပ် လုပ်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေကအပြင်ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းလေးတွေကိုဘဲ အားကိုးရပါတယ်။
အဲ့ဒီဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကြီးမှာ လုပ်ငန်းထူထောင်ရတာလဲ မလွယ်ပါဘူး။
အလုပ်သမားဥပဒေ လူမူ့ဖူလုံရေးဥပဒေတွေနဲ့ ရှုပ်ယှက်ခတ်ပြီး
ဘာအမူ့ဖြစ်ဖြစ် ပိုင်ရှင် ကအရှုံးပေးရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာရယ်
ဒီတော့လဲ လူလိုရင် သတင်းစာကခေါ်တာ ပြုတာ ရှားပါတယ်။
ကိုယ့် နီးစပ်ရာ လူတွေထဲ ကခေါ်ပြီး အလုပ်ခန့်လိုက်တတ်ကြပါတယ်။
လူ လိုရင် ကိုယ့် အလုပ် ထဲက လူ ရဲ့ အမျိုးအဆွေတွေ
ကိုယ့် မိသားစုနဲ့ အမျိုးတော်စပ်သူတွေကိုဘဲ လွယ်လွယ်ဆွဲခန့်လိုက်ကြပါတယ်။
ဆာသော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲ ကိုယ့် မိဘနဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ ပွဲရုံမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ရတာပါဘဲ။
စစခြင်း လုပ်ခမရ မနက်စာထမင်းကျွေး နေ့လည်စာမုန့်ကျွေး
အခါကြီးရက်ကြီးမှာ ဆို မုန့်ဘိုးပေးတဲ့ အလုပ်သင်ဘ၀က နေစခဲ့ကြရတာပါ။
အဲလို လုပ်နေရင်းကမှ ရောင်းရေးဝယ်တာတွေကို နည်းနည်းချင်းလက်တွေ့သင်ပေး
လခ စ ရကြတာပါ။
ဆာသော်တို့ငယ်စဉ်ခေတ်တွေကတော့ အလုပ်တစ်ခု ကနေ
နောက်တစ်ခုပြောင်းဘို့ က သိပ်လွယ်တဲ့ကိစ္စလဲမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
အခုခေတ်က ကလေးတွေလို ဟိုရောက်လိုက် ဒီဝင်လိုက် လုပ်လေ့မရှိပါဘူး။
သိပ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တောင်မှ သုံးလေးနှစ်လုပ်ပြီးမှ အလုပ်ပြောင်းတတ်ကြပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ နိုင်ငံတော် ကလည်း ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေကို
သတင်းစာကနေတစ်ဆင့် က ပါ ခေါ်ရပါတော့တယ်။
လက်ကမ်းစာစောင်လို လုပ်ပြီး လမ်းနံဘေးက သစ်ပင်တွေ ဓါတ်တိုင်တွေ
ဒီအွန်လိုင်းက ခေါ်တာက ငွေမကုန်ဘဲ သတင်းစာမှာကြော်ငြာတာ
ဆာသော်တို့လုပ်ငန်းက လဲ မိသားစု မိရိုးဖလာလုပ်ငန်းကနေပြီး
အများနည်းတူ ကုမ္မဏီလို့ ဆိုင်းဘုတ်ပြောင်းလိုက်ပေမယ့် ဟိုး
ဘောစိတို့လက်ထက်မှာတော့ လူလိုတယ်ဆိုရင် ကိုယ် ဆီမှာလုပ်
နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဘဲ အလုပ်လုပ်မယ့် သူရှိလားမေးပြီး
အချို့ဝန်ထမ်းတွေက သူတို့သားသမီး တူ တူမ တွေ အမျိုးတွေ အလုပ် လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်
ဘောစိ တို့ ဘောစချုပ်တို့ ကို ပြောလိုက်လို့ ခန့်ထားတာတွေလဲရှိပြန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘောစသားတို့ ဘောစမီးတို့လက်ထက်ရောက်ချိန်မှတော့ အဲလို
ဘောစိတို့ကတော့ နီးစပ်ရာခေါ်ထားတာက မြဲတယ်
စိတ်ချရတယ်လို့ တွက်ပေမယ့် သူ့သားသမီးတွေကတော့
ကလေးတွေလက်မခံဆို အခုခေတ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကလဲ
ဒါပေမယ့်လဲ ဘောစိ ကတော့ ရှင်းတယ်။
“မင်းတို့ဘာသာမ င်းတို့ ဘယ်က ခေါ်ခေါ် ရတယ်
အလုပ်ခေါ်ပြီဆိုရင် ဘောစချုပ် ဆီက တစ်ဆင့်
ဘယ်သူ့သားလေး ဘယ်သူ့သမီးလေး ဆိုပြီး အလုပ်ခန့်ဘို့ညွှန်ကြားလွှာတွေကတော့ရောက်စမြဲပါဘဲ။
အဲအခါမျိုးဆိုရင် ဘောစမီး ဆီက
“မားမားတို့ ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ “ဆိုတဲ့အသံလေးတွေကိုကြားရပြန်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းစတင်စက လူနည်းနည်းလေးဘဲရှိပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့
ဒီနေရာမှာ အလုပ်လုပ်တာခြင်းတူပေမယ့် လူတွေကနှစ်မျိူးနှစ်စားကွဲလာပါတယ်။
အလုပ်ကို လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရလာတော့ တန်ဘိုးမထားသူတွေပေါ့။
အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစားမလုပ်တာတွေ ကိုမြင်ရတော့ စိတ်ချဉ်ပေါက်မိပါတယ်။
ကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင် သူတို့ကို ဘယ်သူ က ခေါ်လာတာဆိုတဲ့ပုံစံချိုးတတ်ပါတယ်။
တစ်ခါသားမှာတော့ အဲလို ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို
မင်းတို့လို နီးစပ်ပါတ်သက်လို့ရောက်လာတဲ့လူက အလုပ်ကို ပိုတောင်
အင်တာဗျူး အဆင့်ဆင့် နဲ့ ၀င်လာတဲ့သူက သူ့လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်
ငါတို့လိုချင်တဲ့ အရည်အချင်းမမှီရင်ငါတို့ အလုပ်မခန့်ဘူး။
မင်းတို့လို လူတွေက ငါတို့ လို လို မလိုလို
အဲတော့ မင်းတို့က ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့
ခြေစစ်ပွဲ မ၀င်ဘဲနဲ့ ပြိုင်ပွဲ ၀င်ရတဲ့ ဘောလုံးအသင်းလိုဘဲ”
လို့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ပြောထည့် လိုက်ဘူးပါတယ်။
ဒီလို မိုးကျရွှေကိုယ် တွေ ဘယ်ခေတ် ဘယ်အခါမှ ပျောက်သွားမလဲလို့လဲ
ကဲ မိတ်ဆွေရော ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: အဲလို ဆွဲခန့်ကောင်းလို့ ခါတလေ ကိုယ်မွေးတဲ့မြောက်
စိတ်မပူပါနဲ့ ဘောစိရယ် မြောက်ကြာကြာ ငပိမကိုင်နိုင်ပါဘူး
ဆိတ်လအုလို မတည်ငြိမ် ကြောင်ချီးလို အိညံ့အိညံ့လုပ်
အချိုအချာင် ကျားလိုချောင်းပြီး အလုပ်အကိုင် လဒလိုမှိုင်
နွားလို ကျိန်တို့မှလုပ်တတ်တဲ့ ကျွဲပါးစောင်းတီးလေးတွေ
တစ်ရာလောက်ချီးစမ်းပါ လမ်းတဝက် အီးထွက်ချင်လာလို့
အိမ်သာအဝက အဒေါ်ကြီးက တစ်ရာမပေးရင်
မဝင်နဲ့ဒဲ့ဗျာ ကိစ္စက ထိပ်ဝရောက်နေပြီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: စစ်သားတွေ.. ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုလည်း.. အဲလိုဝင်ခဲ့တယ်..။
သားသမီးမြေးမြစ်တီတွတ်.. ဆွေတော်မျိုးတော်တွေလည်း.. အဲလိုဝင်ခဲ့တယ်..။
အခု.. ဒေါ်စုဘယ်လို.. ကက်ဘိနက်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေခန့်မလဲတော့မသိ..
အဲလိုထင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ခေတ်ပြောင်းလာပြီဆိုပေမဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါ ရှေးရိုးစဉ်လာက ခွဲထွက်ဖို့လိုတယ်
.အိုကေရင်သုံးလအစမ်းခန့်..သုံးလပြည့်လို့မှသုံးမရရင် အားနာစရာမလို ထုတ်ပစ်…ဒါမှ
သင့်အေးရိပ် says: မိုးကျရွှေကိုယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မြင်ရင်… တာရာမင်းဝေရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက စကားလုံးတစ်ခုကို သတိရတယ်..။
”နောက်မှပေါက်တဲ့ချို(ဂျို)က မွေးကတည်းကပါလာတဲ့ နားရွက်ထက် ပိုရှည်သွားတာကို ခံရခက်တယ်” တဲ့…။
Tawwin Pan says: အင်တာဗျူးခေါ်ရင် မနက်ပိုင်း ၉နာရီ ၁၀နာရီလောက်၊ ဒါမှမဟုတ် ညနေပိုင်း ၃နာရီနောက်ပိုင်း အဲလိုခေါ်တာ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ အလုပ်ရှိတဲ့သူတွေဆို နေ့တ၀က်ယူလို့ရတာပေ့ါ။ ကိုယ်တွေကတော့ အင်တာဗျူးခေါ်တဲ့အချိန် အဆင်မပြေရင် အချိန်ပြန်ညှိတာပဲ။ အချိန်ပြန်ညှိလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ မလာနိုင်ဘူးပြောလိုက်တာပဲ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ပုဂ္ဂလိက အလုပ်တွေ ရှားတဲ့အချိန်ကို မကြုံဖူးတော့ မပြောတတ်ဘူး..
ဒါပေမယ့် အခုလိုအချိန်မှာတော့ အစိုးရအလုပ်ကို လုံးဝကို မလုပ်ချင်ဘူး..
– အလုပ်ရဖို့.. အရည်အချင်းကို နောက်ထား.. ပိုက်ဆံထုပ်ကိုင်ပြီး ကပ်ရတယ်…
– အလုပ်ထဲမှာလည်း အများစုက အရည်အချင်းထက် ပိုက်ဆံကြောင့် ဝင်လာရတာများတယ်.. အပြိုင်အဆိုင်တွေ သိပ်ပေါတယ်..
– အလုပ်ကို ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား. အထက်နဲ့ ပနံသင့်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်… ကြိုးစားတိုင်းလည်း ရာထူးမတက်ဘူး..
-ရာထူးတက်ဖို့အရေး ပိုက်ဆံထုပ်ကို ထပ်ကိုင်ရတယ်.. စာမေးပွဲဝင်ဖြေရတယ်.. ရာထူးဆိုတာကို ပိုက်ဆံရယ်.. စာမေးပွဲရယ်… ဖားတတ်မှုရယ်က ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်..
ဒါတွေက ကိုယ့်အမြင်ဆိုတော့ မှားရင်လည်း မှားနိုင်ပါတယ်… အမေစု အစိုးရလက်ထက် ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ပုံကို လေ့လာပြီးရင်တော့ ဆရာမဝင်လုပ်ဖြစ်မလား မသိ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.